Liverpool Oo Guul Weyn Ku Bilaabatay Xilli Ciyaareedka Premier League – Heemaal News Network
Liverpool Oo Guul Weyn Ku Bilaabatay Xilli Ciyaareedka Premier League
Liverpool ayaa fariin cad u dirtay kooxaha kale ee kula tartamaya horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ka dib markii ay guul weyn ku furteen kulankoodii ugu horeeyay iyagoo 4-1 ku xasuuqay kooxda Norwich City oo marti ugu aheyd garoonka Anfield.
Todobo daqiiqo ayay qaadatay Liverpool inay hogaanka ciyaarta u qabato, waxaana goolkii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan ee horyaalka Premier League uu noqday gool uu iska dhaliyay kabtanka Norwich City Grant Hanley kaa soo shabaqa iska geliyay karoos uu soo dhigay Divock Origi.
Intii aan la gaarin daqiiqadii 20aad ayay Liverpool heshay goolkeedii labaad ee ciyaarta, Firmino ayaa xerada ganaaxa dhexdeeda kubad ugu dhex bixiyay Mohamed Salah kaasoo isna si aayar ah u dabamariyay goolhayaha Norwich City.
Mohamed Salah ayaana caawiye ka ahaa goolkii seddexaad ee Liverpool ee dhashay daqiiqadii 28aad, markii koorno uu soo qaaday uu madax ku dhaliyay daafaca darbiga ah Virgil van Dijk.
Waa markii ugu horeysay ee ay Liverpool seddex gool Premier League ah dhaliso ciyaarta oo aan gaarin 30 daqiiqo tan iyo sannadii 2014.
Liverool ayaase waxaa soo wajahay walwal weyn markii uu dhaawac soo gaaray goolhayahooda koowaad Alisson daqiiqadii 36aad kaasoo dhaawac muruqa kubka uu soo gaaray xilli uu kubad bilow ah darbeynayay. Waxaana bedelay goolhayaha cusub ee Liverpool Adrian oo si lama filaan ah ku helay kulankiisii ugu horeysay ee Reds.
Wax yar ka dib dhaawaca Alisson, Liverpool waxa ay heshay goolka afaraad daqiiqadii 42aad markii kubad karoos ah uu soo qaaday daafaca midig Alexandre Arnold uu madax ku dhaliyay weeraryahanka reer Belgium Divock Origi. Waxaana qeybtii hore lagu kala nastay 4-0 oo ay Reds ku hogaamineysay.
Dhowr daqiiqo ayay qeybtii labaad ciyaarta hakad gashay ka dib cilad farsamo oo soo wajahday qaabka ay kuwada xiriiri karaan garsoorayaasha iyo garsooraha muuqaal caawiyaha VAR.
Si kastaba, halyeeyga Liverpool Jamie Carragher oo Sky Sports u tabinayay ciyaarta ayaa sheegay in taageerayaasha Premier League ay u baahan yihiin inay taageeraan VAr isagoo ku baaqay in la sii isticmaalo aaladaan inkastoo dhibaatooyinkeeda ay leedahay.
Liverpool ayaa qeybta labaad ku bilaabatay si la mid ah qeybtii hore, waxay heleen fursado badan oo goolal intaan ka badan ay ku dhalin kareen laakiin waxaa ka horjoogsaday goolhayaha iyo birta goolka.
Norwich ayaana gool soo ceshatay daqiiqadii 64aad markii Pukki oo ciyaarayay kulankiisii ugu horeysay ee Premier League uu ka dhex baxay daafac Liverpool isagoo iska ilaaliyay inuu garab dhaaf sameeyo, waxaana uu kubad hoose dhex dhigay shabaqa.
Ciyaarta waxa ay ku soo dhamaatay 4-1 iyadoo Liverpool ayaa guul ku bilaabatay xilli ciyaareedka cusub ee Premier League halka kooxda heerka labaad ka soo dalacday aysan helin bilaabashadii ay filayeen.
Itoobiya Oo ku Dhawaaqday Waqtiga la Qabanayo Doorasho Guud Oo ka Dhacda Dalkaasi.
Musharaxiinta Jubbaland Oo Taageeray Goa’aanka Wasaaradda Arimaha Gudaha